Global Voices teny Malagasy » Honduras : Ao Sabanagrande, Vazivazy Tsy Fanao Intsony Ny Fanabarabaràna Polisy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2012 0:33 GMT 1	 · Mpanoratra Silvia Viñas Nandika nirinandrea
Sokajy: Amerika Latina, Honduras, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Ireo Polisy ao an-toerana dia tsy nahatanty mihitsy nandritra ilay hetsika feno hanihanin'ny tanora tao an-tanàn-dehiben'i Sabanagrande, atsimon'i Tegucigalpa, renivohitr'i Honduras. Isan-taona i Sabanagrande dia manao hetsika ara-kolotoraly antsoina hoe Rey Feo, (na mpanjaka ratsy tarehy).
Ilay bilaogera sady poeta Fabricio Estrada dia manoritsoritra izany ho toy ny “Fomban-drazana meva sy kanto izay mahavory olona mpilatro be indrindra isan-taona maneho ny endrika matimatin'ny zavatra any amin'ny faritra atsimo.”Teo ho eo amin'ny tanora 40 teo no nanao saro-tavanà “Mpanjaka ratsy tarehy”ary namaky fanambarana feno fosafosan'ny olona eo tanàna sy honohono miady rima. Ny 04 Febroary tamin'ity taona ity, ilay Mpanjaka Ratsy Tarehy dia nanolotra ny vazivaziny hoan'ireo Polisy ao an-toerana.
Ireo polisy ao Honduras dia teo ambany fanakianana mamay ho mpanao kolikoly , mpandroba ireo mponina, ary mpiray tsikombakomba amin'ireo mpamono olona  sy ireo andian-jiolahy . Ary tsy isalasalana, fa ny fifandroritana eo amin'ny sivily sy ny polisy dia miha mahery.
Tao amin'ny bilaoginy Bitácora del Párvulo  [es], i Fabricio dia nanazava ilay rivotra niely tao amin'ilay renivohitra io andron'ny Rey Feo io :
“Milaza aminareo aho, fa amin'ity indray mitoraka ity dia hiresaka momba ny polisy izy ireo, manana rahalahy aho izay ao anatin'io …” hoy ny lehilahy iray mibitsibitsika. Kanefa efa fantatry ny olona rehetra. Nanàna taona iray manontolo izy ireo idirana ao amin'ny fiainan'ny olon-drehetra sy ny olon-tokana, ary ny resaka momba ny polisy dia sady an'ny rehetra no an'ny olon-tokana : Olon-drehetra satria ireo filazam-baovao dia efa namoaka izany sahady, ary fiainan'olon-tokana satria ny tsara indrindra dia ny mangina toy izay hanao izay hampigadra ny tena.
Aty aoriana tao amin'ilay lahatsoratra, Fabricio dia manoritsoritra ny fihetsik'ireo polisy tamin'ny famakiana ilay fanambaràna :
Ireo Polisy dia nihidy vazana ary nahazo ny anjara tsatok'antsiny tamin'ity taona ity : “Oh ry ingahy polisy, zanak’ …eto dia hampianatra lesona iray anareo izahay, satria amin'ny halatra sy vono olona ihany aza no hanomezan'izy ireo karama anareo.” Miandry ny fahavitan'ilay vakiteny izy ireo, izay vao niantsampy hamely ny rehetra, kanefa tonga kosa ireo miaramila avy amin'ny vondron-tafika voalohany ka niaro [ireo tanora]. Dia tena hoe tantara an-dampihazo, tompokolahy sy tompokovavy, tantara an-dampihazo izany! hoy ny hikiakan'ilay lehilahy teo amin'ny fanamafisam-peo, nefa ireo miaramila sy ireo polisy dia manao ny ataony hatrany raha niala nangingiana toy ny aloka kosa ireo mpandray anjara. […]
Tamin'ity indray, dia mba afa-nitsoaka tamin'io ny olona. Tsy misy sivana afaka hijoro manoaloana io fanoherana efa nisy an-taonany maro ao Sabanagrande io : Ilay mpanjaka ratsy tarehy.
Fabricio dia nanambara fa  [es] fa andro maromaro taty aoriana , ireo polisy dia niasa fatratra hisambotra ireo tanora nandray anjara tamin'ilay hetsika.Teo amin'ny olona 150 no namaly “nanohitra ny ny fanalambaraka sy ny fisamborana tsy amin'antony nataon'ireo polisy” taminà tovolahy maro.
Ilay tsy fahafaliana dia nalamina nohon'ny fanomezan-toky hoe hisy ny fanelanelanana ataon'ny COFADEH [Komity ahitàna ny havan'ireo gadra sy ireo tsy hita popoka tao Honduras], izay niandraikitra ny fanaraha-maso niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona sy ny fanampiana ireo niharan'ny fanitsakitsahana ny fahalalahana hivezivezy nofaritan'ny lalam-panorenana ary ny fampitahorana izay noketrehin'ireo polisy tamin'ny herinandro lasa teo taorian'ny fitazonana ny iray tamin'ireo lehilahy teo (Mauricio Canales), izay voadaroka ary nalàna baraka sy notsiratsiraina noho ny safidiny ara-pananahana.
Nirongatra ny hatezeran'ireo mponina ao Sabanagrande noho ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina napetraky ny polisy izay mitaky ireo ankizy latsaky ny 17 taona mba “hasaina matory” rehefa any amin'ny 10:00 alina any, raha tsy izany dia mety ho voasambotra na voampanga ho mpirenireny mampiahiahy. Fabricio dia nandinika ny fiovàn'ny fiainana an-drenivohitra teo anatrehan'iny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina tsy ofisialy iny ho toy ny:
Fahanginana tsy misy ohatra izany no nanarona ny tanàna ary ny fiaran'ny polisy izay mandeha mora manao ny fisafoana sisa no hita. Ary tsy làza masaka ny fitenenana fa io dia azo oharina amin'ny tantara malazanà didy jadona iray napetraka tsy misy henatra.
Vokatr'ireny fifandonana maro samy hafa tamin'ny polisy ireny, ireo mponina dia nanapa-kevitra ny handray an-tanana ny olan'izy ireo ary nanangana ny Komity Miaro ny Zon'olombelona voalohany eo Sabanagrande izay eo ambany fiadidian'ny COFADEH. Fabricio, izay ankehitriny dia rantsana mavitrika ao amin'io Komity io, dia manambara fa “ny fiarahamonina ao Honduras dia nahatratra ny fetra farany izay tokony hampahaingana ny fizotran'ny fandaminana ara-piarahamonina mbola tsy nisy ohatra izany.” Nozarainy ireo sary tamin'ilay fivoriana voalohany nataon'ilay fikambanana” :
Tao anaty hafatra anaty aterineto, i Fabricio dia milaza amin'ny Global Voices fa ilay komity dia mikarakara fampisehoana sy famakiana tononkalo ho fanohanana ny Zon'olombelona ny Zoma 02 Martsa, ary koa ny hoe efa nahita fahombiazana ilay tarika :
Ny fanerena avy amin'ireo mponina ( fitorevahana am-pilaminana mandritry ny herinandro, tao amin'ny valan-javaboahary, nanomboka tamin'ny 10 ora alina) miampy ny hetsika ataon'ny COFADEH, Radio Globo (mpanao gazety, Félix Molina) sy ny Ministeran'ny Fitsarana ary ny Zon'olombelona (izay mandray anjara tamin'izany noho ny maha-mpirahalahy mian'àla azy ireo) dia nanamafy ny trangan-javatra tamin'ny alalan'ny fanomezana baiko ny mba hanoloana avy hatrany ireo polisy enina voampanga amin'ny fihetsika tsy misy antony toy izany.
Ireo tanora dia tena faly tokoa, Vitantsika ihany ilay izy!
Isaorana manokana i Fabricio Estrada tamin'ny fanomezany alalàna an'ny Global Voices hampiasa ny sariny ary koa tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny fanoratana izao lahatsoratra izao nanome vaovao. Tsidiho ny bilaoginy País Fotogénico  [es] ahitànao sary maro hafa ary tantara maro avy ao Honduras.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/25/29848/
 mpanao kolikoly: http://www.npr.org/2012/02/11/146668852/in-honduras-police-accused-of-corruption-killings
 mponina, : https://globalvoicesonline.org/2012/01/10/honduras-priest-denounces-police-attack/
 mpiray tsikombakomba amin'ireo mpamono olona: http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/111121/when-the-police-are-part-the-problem
 ireo andian-jiolahy: http://quotha.net/node/2145
 Bitácora del Párvulo: http://fabricioestrada.blogspot.com/2012/02/rey-feo-en-sabanagrande-febrero-del.html
 dia nanambara fa: http://fabricioestrada.blogspot.com/2012/02/sabanagrande-nace-en-su-primer-comite.html
 País Fotogénico: http://paisfotogenico.blogspot.com/